Ungalondoloza kanjani inqubekelaphambili yami ku-SEO uma ngabe isizinda sokushintsha?
Isinqumo esenziwe kahle sokushintsha igama lesizinda esikhulu, ngokuqinisekile. Kodwa ngokucabangela amagama avamile acindezelayo abhekene nezinkinga zesabelomali ezivela endleleni eya ekubuyiseleni okuphelele, abaningi bethu bangazizwa bekhungathekile.
Phakathi kwemiphumela engokoqobo eyenzekayo ye-SEO ngemuva kwesizinda sokushintsha, ukulahlekelwa okwesikhashana kwe-traffic organic. Ukulimala okunjalo kuvame ukulinganiselwa ku-5-20% futhi kulindeleke ukuthi kube khona ithrafikhi yewebhu, okungenani ngokusebenzisa isikhathi sokuqala kuze kufike emavikini angu-3-4 ngokuvamile adingekayo yi-Google yokukhwabanisa i-bots ukutadisha ama-URL amasha, ukuqondisa noma enye i-off-page izibuyekezo. Okokuqala, zizwe uzolile, njengoba lolu hlelo lufanele kube nakanjani ukuze lukhokhele ukulahlekelwa kwakho. Ngaleyo ndlela, ngincoma ukusebenzisa isicelo somkhankaso we-PPC ohloswe egameni lakho lomkhiqizo webhizinisi, kanye nezinto ezisemqoka ezingekho uphawu olusebenzayo ekusesheni.
Ngokuvamile, isabelo sezingonyama se-webmasters nabathuthukisi bewebhu bezoqala ukuthatha ngemuva kokusebenza kwemithi, ukuqala ukubuyiswa uma i-SEO yabo bese ishintshe imisebenzi yesizinda sesivele isiqalisiwe. Kodwa ungase uthathe isinyathelo esengeziwe. Ngisho ukuthi ungakwazi ukuya eminye imisebenzi yokuqala ukwenza konke okusemandleni akho ukusiza i-Google ngokwayo, kanye nazo zonke ezinye izinjini zokusesha, ukuthola ukuqonda okungcono kwalokho okuzokwenzeka bese usabela ngokufanele. Ngakho-ke, ungagcina inqubekelaphambili yakho ku-SEO ukuguqula isizinda sokuguqula kanye nayo yonke imilayezo eyayizungezile ibe yinkambiso yokuthutha. Ngiphakamisa ukuthi uzizwa njengomphathi, ngokulandela lezi zinyathelo ezilandelayo:
Ukuvuselela izixhumanisi zakho ngokususelwa kwamanye amawebhusayithi aphezulu okugunyazwa kwesizinda kuwumqondo ohlakaniphile. Ngesikhathi umatasa ngokubuyekeza nokuvuselela ama-backlink akho wamanje kwi-intanethi, ukhululeke ukuhumusha isidingo sokushintsha isizinda njengamathuba amasha amasha. Ngisho ukuthi ungakwazi kalula ukubuyisela emuva ama-backlink fresh ngaphezulu emavikini alandelayo ushintsho lwesizinda. Ukwenza kanjalo, uzobe uthumela izimpawu ezingaphezulu nakakhulu futhi eziwusizo ku-Google. Futhi lokho kuyobe kunikezwe isikhundla esiphakeme kuma-SERP ngemuva kwakho konke.
Ungakhohlwa ukubuyela emuva kwezingubo zakho zangemuva ezindala ezenziwe kabusha nge-URL entsha. Umqondo oyinhloko lapha ukubuyisela isethi yakho ephelele ye-backlinks yekhwalithi ngenkathi kunciphisa inani lokuqondisa kabusha kwisizinda ngesikhathi esifanayo. Ukwenza, hamba e-intanethi usebenzisa ithuluzi elikhethekile (Ngangivame ukuthembela kuma-ahrefs), thola ama-backlink akho negunya eliqine kakhulu. Uma sezikhona, qiniseka ukuthi uqhuba umzamo wokufinyelela usebenzisa i-imeyili ukucela isibuyekezo kubo bonke.
Ekugcineni, ungakhohlwa ukwenza ukukhushulwa kwegama lakho lesizinda lesizinda ngeziteshi zenhlalo yomphakathi. Ngaleyo ndlela, qala ngokubuyekeza i-URL yakho ye-URL kanye negama lomkhiqizo webhizinisi (uma likhona) ezinhlakeni ezidume kakhulu nezihlobene. Futhi, kungaba umqondo omuhle kakhulu ukumemezela ushintsho lwesizinda somcimbi kwezinye zeziteshi zakho zokuxhumana zenhlalo. Lokhu kuzokusiza ugcine izethameli zikwaziswa ukuthi isizinda sakho kuphela sizoshintsha, kodwa izindinganiso eziphezulu zemikhiqizo yakho noma amasevisi kuzoba okufanayo nanoma kunjalo Source .